Fardaha dunida ugu quruxda badan: taranka iyo astaamaha | Fardaha Noti
Farduhu waa mid ka mid ah noolaha ugu quruxda iyo quruxda badan ee ku nool dhulkeenna. Waxay ka jiraan lakabyo kala duwan, jinsiyado iyo jimicsiga jirka, mid walbana qaab gaar ah. Maanta waxaan diiradda saari doonnaa quruxda, Diyaar ma u tahay inaad la kulanto qaar ka mid ah fardaha ugu quruxda badan adduunka?
2 Wadada Isbaanishka ee Andalusiya
9 Cob Irish
12 Buuro Dhagax
Astaanta Qaranka ee Turkmenistan, Shaki la'aan waa mid ka mid ah noocyada loo yaqaan 'equine breeds' oo jaakadoodu dhalaalaan inta badan soo jiidata dareenka marka falaaraha qorraxda ay iftiimiyaan. Iftiinkiisa gaarka ah waxaa sabab u ah borotiinno u eg macdan marka iftiinka lagu saadaaliyo iyaga. Waa mid ka mid ah noocyada leh tijaabooyinka ugu yar adduunka, qiyaastii 1.250. Waa nooc isboorti oo jimicsi weyn leh. Midabada jaakada noocani waa: midab cad, madow, palomino ama cirro.
Xigasho: youtube, com
Astaamaha physiognomic-ka ee Akhal-Teke ayaa ka dhigaya mid ka mid ah isleegyada ugu caatada ah jira: madaxiisa iftiinka ah, dhagahiisa dhaadheer iyo kuwa dhuuban ee ku yaal meel sare, addimmadiisa dhaadheer iyo kuwa khafiifka ah iyo sidoo kale qoortiisa iyo jooggeeda qiyaas ahaan ah 160 cm. Maqaarku aad ayuu u fiican yahay jaakaduna waa xariir. Dabada iyo maanku aad bay u yaryihiin fringe-na wuu ku maqanyahay.
Wadada Isbaanishka ee Andalusiya
El Faraska Andalus Waa nooc faras Isbaanish ah oo asal ahaan ka soo jeeda Andalus. Isbaanishka waxaa badanaa looga yaqaanaa «faraska Isbaanishka» iyo waxaa si rasmi ah loogu magacaabaa "Pura Raza Española"In kasta oo ay jiraan noocyo kale oo Isbaanish ah, haddana waxaa loo tixgeliyaa sinaanshaha Isbaanishka.
Waxaan nahay ka hor mid kale oo ka mid ah tartamada ugu da'da weyn adduunka, faras Iberiyaan ah oo ah nooca baroque-ga xasaasiyad weyn iyo caqli badan marka lagu daro lahaanshaha a dabeecad dabacsan oo sharaf leh. Waxaa laga yaabaa inay tahay tan dambe ee iyaga ka dhigtay astaamahooda ugu qiimaha badan. Tani waxay sidoo kale ka dhigtay mid loo tixgeliyo mid ka mid ah fardaha adduunka ugu fiican dagaalka.
Waxaa sidoo kale aad u jeclaystay sharafta ay leedahay awgood dhalasho iyo qurux aad u weyn, oo lagu gartaa jirkeeda oo itaal badan, iyo manjo iyo dabo qaro weyn leh.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah fardo ugu fiican adduunka in lagu safro masaafo aad u badan, waa sahal lagu kala sooci karaa jaakad gaar ah oo mottled ah, wuxuu leeyahay meelo mugdi ah oo ku dhex milmay maqaarka casaanka wuxuuna keenaa maqaarka xarkaha leh.
Waxay ahayd Nez Perce Indians oo ku arkay fardiyadan iyaga oo wata dhogorta gaarka ah, nooc ku habboon ugaarsigooda iyo howlaha dagaal. Marka laga hadlayo dabeecadooda, way u taagan yihiin haybadiisa weyn, xoog iyo badnaan. Magaca "Appaloosa" wuxuu ka yimid Webiga Palouse, kaas oo ku dhex maray gobolka ay deggan yihiin Nez Perce.
Shaki la’aan, ururinta noocyada ugu quruxda badan adduunka marka la eego fardaha, Carabku waa inuu goobjoog ahaadaa, miyaadan u malayn?
Waxaa jira natiijooyin qadiimiga ah oo tilmaamaya in 4.500 sano ka hor ay jireen fardo aad ugu eg Carabtii maanta. Tan ayaa iyaga ka dhigaysa mid ka mid ah fardaha ugu da'da weyn. Abtirsiinta Carbeed waxaa laga heli karaa noocyo fara badan oo casri ah oo fardo fuushan. Waxaa jira faracyo fara badan oo Carab ah, laakiin dhamaan safafkan waxaa la rumeysan yahay inay ka yimaadeen Carab nooca Kuhaylan ah.
Caqli badan iyo iska caabin, dabeecad wanaagsan iyo qurux badan, waxay ka mid yihiin noocyada ugu caansan ee lagu soo bandhigo, labbiska, socodka, goynta, boodada ama raacitaanka daaweynta.
Fardaha Carabta waxay leeyihiin gadaal xoogaa dheer iyo heer ah iyo dabada kor loo taagay. Mid kale oo ka mid ah astaamaha lagu garto ayaa ah madax qaab eg, lehna weji ballaadhan, indho waaweyn, dulalka waaweyn ee sanka, iyo sanka oo yar.
Faraska Friesia, oo sidoo kale loo yaqaan Frisian ama Friesian, waa nooc ka yimid gobolka Friesland ee Nederland.
Dabeecad wanaagsan iyo xushmad weyn, faraska Friesian-ka ayaa u taagan diyaarad qurux badan oo madow ama dhogor madow oo dhif ah oo aan lahayn astaamo midab kale leh, iyo joogitaankooda. Maansada iyo dabada uu aad u qaro weyn oo fara badan, waxaan ka heli karnaa mararka qaarkood xoogaa ruxrux ah sida muuqaalkii hore. Lugaha sidoo kale waxay leeyihiin dhogor badan. Madaxa, oo aad u dheer, waa dhagaha yaryar had iyo jeer kacsan oo xarrago leh. Waxay cabbiri karaan ilaa 175 cm.
Waxaa loo adeegsaday sidii faras dagaal Jarmalku, iyo inyar oo yar, iyada oo loo marayo iskutallaabyo kala duwan, sida wadada Andalusian, taranka ayaa la hagaajiyay ilaa Friesian-ka hadda jira.
Natiijada isku dhafka ah Shires, Frisians, Dales iyo kuwa kale fardaha ingiriiska hooyo, Faraska 'gpsiga' ama kiciyey qarnigii XNUMXaad ee jiifka, ama dadka Roma oo ka yimid UK.
Es oo caan ku ahaa quruxdiisa, badnaanteeda iyo docility-keeda, Maaddaama qoyska jimicsiga, dhaqdhaqaaq joogto ah, u baahnaa faras xoog leh oo u qalma labadaba in la jiido gawaarida culus ee u adeegaya guryaha guurguura iyo in lagu raro fuulista mar aan laga foogin. Waa loo tixgeliyey mid ka mid ah fardaha ugu caqliga badan taas oo laga heli karo dunida salka ku haysa, waxay abuuraan xidhiidh aad u adag oo ay la yeeshaan milkiilahooda marka loo eego noocyada kale ee dabeecaddoodu aad u sarrayso. Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan faraska jimicsiga Mount for fiican ee loogu talagalay fardooleyda layliga wax kastoo da 'ay yihiin
Taranka Haflinger, oo sidoo kale loo yaqaan Avelignese, ayaa ahaa horumaray dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad ee Austria iyo Talyaaniga. Hayso isirka carabta iyada oo loo marayo aasaaskii aasaasiga ee nooca hadda jira: Folie (wuxuu dhashay 1874, waa ina waddo carbeed oo dhameystiran).
Waa faras yar oo adag oo aad loogu habeeyay socodka buuraha, oo dhererkiisu u dhexeeyo 137 cm ilaa 152 cm. Dharkeeda, marwalba palomino, waxay yeelan kartaa midab iftiin ilaa midab madow. Xaaladaha qaarkood, qaybta caloosha ayaa ka khafiifsan jirka intiisa kale.
Nooca asalka ah ee Iceland. In kasta oo dhererkoodu u eg yahay sida faras (dhererkoodu wuxuu u dhexeeyaa 125 cm ilaa 145 cm), waxaa loo arkaa inay yihiin fardo ku habboon. Waa faraca kaliya ee ka yimaada dalkan.
Waxaan ka helnay tixraacyo qarnigii laba iyo tobnaad oo nooga warramaya sida fardahan ay ahaayeen waxa cibaadada u ah dhaqanka Waqooyiga Yurub. Waxaa la rumeysan yahay inay ka soo jeedaan fanaaniinta Scandinavian-ka intii u dhaxeysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Muuqaal caan ah oo faraskani leeyahay ayaa ah dhogor badan sida ay ula qabsatay xaaladaha ba'an ee jasiiradda.
Tani waxay abuurtay taas hadda ku nool Ireland, asal ahaan xoogaa lama hubo. Qaarkood waxay taageeraan aragtida ah in fardahan ay ka yimaadeen dalalka Waqooyiga Yurub, halka kuwa kale ay sheeganayaan inay gebi ahaanba asal ahaan ka soo jeedaan Irish. Sikastaba xaalku ha ahaadee, quruxdooda shaki kuma jiro, taas oo si weyn loogu riyaaqay, iyo waliba wanaagooda dabeecadeed.
Waa nooc aad isu dheellitiran oo isu dhigmi kara, faras is haysta oo leh muruqyo aad u horumarsan, taas oo ka dhigaysa faras aad u fara badan oo soo bandhiga shaambad cajiib ah.
Astaamaha astaamahani waa dhogor dheer oo lugaha ah taas oo loo yaqaan baalal daboolkaasna koofiyadda. Sidoo kale man iyo dabo waxay leeyihiin dhogor dhumuc leh. Badanaa waxay leeyihiin indho buluug khafiif ah, indho jilicsan ama midab kasta. Koodhka xayawaanadan qaaliga ah wuu adkaan karaa ama la rinjiyeyn karaa sida ku dhacday muuqaalkii hore.
Mustang ama Mustangs Waa faraska duurjoogta ee Woqooyiga Ameerika. Su dhogorta Aad baa loo kala soocaa maxaa yeelay waa a isku dar qaxwaha leh buluugga codkiisa wuxuuna siinayaa dhalaal gaar ah. Waa wax iska caadi ah in lagu tiriyo inuu ka mid yahay faraska ugu quruxda badan adduunka, miyaanay kula ahayn?
Runtii waa wax ku saabsan fardo weyn (xayawaanka baxsada ama lumiya taas oo dib loogu soo celiyay noloshii duurjoogta) tan iyo, dhamaadka Pleistocene, sinnaanta waxay ku bakhtiyeen Waqooyiga Ameerika waxayna ahaayeen oo ay dib u soo celiyeen guumaystayaashii Isbaanishka qarnigii XNUMXaad. Kuwa ay awooweyaashu waa Isbaanishka Isbaanishka ee Isbaanishka, Carab ama Hispano-Carab. Bannaanka ballaaran ee Mareykanka iyo maqnaanshaha ugaarsatada dabiiciga ahi waxay gacan ka geysteen ballaarintiisii ​​degdegga ahayd. Maanta waxay halis ugu jiraan inay baabi'iyaan, in kasta oo walaaca sii kordhaya ee deegaanka iyo noolaha ku dhex nool, ay naga dhigeyso inaan ku qanacsanaano arrintan.
Aad baa loogu qaddariyaa iska caabbintooda weyn iyo xooggooda, iyagu waa tijaabooyin isku dhafan oo leh dherer u dhexeeya 135 cm iyo 155 cm. Sida uu dabeecaddiisa, Runtii waa dad dhaqso leh oo gebi ahaanba madaxbannaan.
Ka soo gobolka Le perche - Faransiiska, Faraca Percheron waxaa loo aqoonsan yahay xooggiisa iyo daacadnimadiisa, iyo sidoo kale quruxdiisa astaamaha.
Fardaha laga soo saaray gobolkan Faransiiska waxay lahaayeen magac ballaadhan, sidaa darteed, waxaa la go'aansaday in laga tallaabo faras la yiraahdo Jean le Blanc oo wata maro ku yaal Le Perche sanadkii 1823. Waxay ka socotaa faraskan dhammaan fardaha Percheron. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in faraska Carabta uu door aasaasi ah ka ciyaaray jilitaanka.
Raza ku dhashay buuraha Rocky ee Mareykanka, halka magaceedu ka yimaado "Rocky Mountain". Bariga Kentucky, qiyaastii qarnigii XNUMXaad, waxaa ka soo muuqday faras yar, kaas oo dhawaan loo bilaabi doono in loogu yeero "Faraska Rocky Mountain," kaas oo uu ka soo jeedo safkan isleeg ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika aad looga qadariyo.
Si weyn loogu yaqaanay midab khaas ah oo jaakad leh, oo leh codad shukulaato ah oo jidhka ku jira, manka ubaxsan iyo dabada cad ee leh codad lacag ah. Buurta 'Rocky Mountain', waxay dabooshaa ku dhowaad midab kasta oo adag oo ka mid ah jaakadda sinnaanta, si kastaba ha noqotee midka kor lagu sharaxay waxaa loo tixgeliyaa kan ugu quruxda badan ee noocyadan.
Taranka ayaa loo yaqaan, sidoo kale macaan iyo dabeecad wanaagsan, waxaa loo barbar dhigaa eeyaha iyagoo ku raaxeysta shirkadda aadanaha.
Noocyada kale ee loo tixgeliyo kuwa ugu quruxda badan, in kasta oo aanaannaan ku darin maqaalkeenna, waa: roan buluug ah, faras Lusitaaniyiin ah, Hanoverian, Ingiriisiga loo maro ama loo yaqaan 'pinto'.
Maxay kula tahay Maxaad u malaynaysaa inay yihiin kuwa ugu fiican fardaha adduunka ugu quruxda badan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Fardaha adduunka ugu quruxda badan